Saameynta ka dhalan karta Qodobbadii Ka Soo Baxay Shirkii Golaha Iskaashiga Dowlad Gobolleedyada Ee Kismaayo – Kalfadhi
Saameynta ka dhalan karta Qodobbadii Ka Soo Baxay Shirkii Golaha Iskaashiga Dowlad Gobolleedyada Ee Kismaayo
September 11, 2018 September 11, 2018 Kalfadhi
Shirkii 3-aad ee iskaashiga dowlad gobolleedyada Soomaaliya oo ka soconaayey magaalada Kismaayo ee xarunta kumeel gaarka ah ee maamulka Jubbaland intii u dhexeysey 4-ta ilaa 8-da bishaan sebteembar aya laga soo saarey war murtiyeed xiriirka loogu jarey dowladda federaalka ah ee Soomaaliya, iyadoona shuruudo la hor dhigey soo celinta xiriirka labada dhinac ee dowladda federaalka iyo dowlad gobolleedyada.
War murtiyeedka oo ka kooban toddobo bog isla-markaana gogol looga dhigey labo qodob oo kala ah amniga iyo siyaasadda ayey madaxda dowlad gobolleedyadu sheegeen iney sabab u yihiin xumaanshaha xiriirka labada dhinac. golaha ayaa dhaliiley dowladda federaalka iyagoona sheegey iney dowladdu ku guul darreysatey heshiisayadii iyo ballamadii hore ay u wada galeen labada dhinac iygoona soo celinta xiriirka ay ku dhawaaqeen iney hakiyeen ku xirey saddex qodob oo kala ah:
In Dowladda Federaalku joojiso faragelinta gurracan ee ay dowlad dobolleedyada ku hayso.
In ay garawshiyo ka bixiso xiisad abuurka iyo faragelinta joogtadda ah.
In la helo hannaan iyo heshiis wadashaqeyn oo leh dammaanad lagu kalsoonaan karo.
Mustafa Maxamed Cali oo ah aqoonyahan iyo falanqeeye siyaasadeed ayaa qaba in arrintaan ay keeni karto jahawareer siyaasadeed oo khatarteeda leh iyadoona saameyn weyn ku yeelan karta laba dhinac oo muhiim u ah habsami u socodka howlaha dowladda federaalka ah, waxaana uu sheegay in ay ay ka dhalan karto:-
1: In gaabis uu ku yimaado wax qabadka iyo howlaha dowladda federaalka isla markaaana laga mashquulo waxyaabo muhiim ah sida dhammeystirka iyo dib u eegista dastuurka, u diyaar garowga doorashooyinka soo socda.
2: In kaalmadii beesha caalamka iyo hay’adaha kale ee taageera dowladda Soomaaliya uu hakad ku yimaado isla markaana ay dib u eegis ku sameeyaan la macaamilkoodii dowladda federaalka maadaama kalsoonidii ay kala noqdeen dowlad qobolleedyada dalka taasoo saameyn weyn ku yeelan karta dowladda federaalka ah ee Soomaaliya.
Balse Cabdikariim Xasan Jaamac oo ahaa wasiirkii hore warfaafinta, boostada iyo is-gaarsiinta ee xukuumaddii kumeel gaarka ahayd ee Farmaajo si dhow-na ula socda arrimahaan ayaa qaba aragti ah in khatar aad u weyn uusan ku yeelan doonin hadalka ka soo yeerey madaxda dowlad gobolleedyada; dhinacayada kala duwan ee nolosha caadiga ah isla markaana ay tahay uun siysasad ay ku soo jeedinayaan dareenka dowladda ayna rabaan iney faragelin kaga ilaashadaan kuraastooda. Mudane Cabdikariim ayaa intaa ku darey in qeybsiga kheyraadka iyo wal-wal iyo culeysyo la xiriira awoodda iyo kuraasta madaxtinimada ee dowlad gobolleedyada ay yihiin waxyaabaha ugu waaweyn ee khilaafkaan uu salka ku hayo.
Dr Xasan Shiikh Cali oo isna ah falanqeeye aad ula socda siyaasadda Soomaliya oo la hadlayay Tv-ga Goobjoog ayaa sheegay in marka laga soo tago in maamul gobolleedyadu ay is dafaacayaan ay jirto in dowladdu ay gabtay kaalinteedii.
Dr Xasan waxa uu sheegay in xita dadka siyaasadda aad ula socda iyo kuwa bartaba aysan wali fahmin halka ay dowladdu u socoto.
Agaasime ku xigeenka Machadka Heritage ee xaruntiisu tahay magaalada Muqdisho Mursal Maxamuud Saney ayaa qaba in ay tahay in wax laga qabto cabashada madaxda maamul gobolleedyada isla markaana dowladda federaalku ay wax ka qaban kartey arrintaan ka hor inta dowladda gobolleedyadu aysan ku dhawaaqin hakinta xiriirka kala dhexeeya dowladda federaalka.
Mursal ayaa qaba in siyasadda arrimaha gudaha la siiyo muhiimadda koowaad si ay gogol dhig ugu noqoto midda arimaha dibadda iyo sidoo kale wada shaqeyn dhex marta dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada.
Cabdulkariim Xassan Jamac ayaa ku talinaya tallaabooyinkan soo socda.
1: in baarlamaanka uu soo dhexgalo isla-maarkana khilaafka ay dhexdooda xaliyaan; wuxuuna khatar weyn ka muujiyey in ajnabi soo dhex galo taasoo keeni karta xal aan u wanaagsaneyn labada dhinac iyo shacabkaba.
2: In dowladda federaalka hadalladeeda iyo heshiisyada ay la galaan dowlad gobolleedyada ay raaciyaan ficil oo aysan ku ekaan hadal oo keliya.
Xildhibaan Dr. Cilmi: In Aqalka Sare Uu Ka Baaqdo Furintaankii Kalfadhiga Afaraad Waa Arrin Walaaceeda Leh
Xildhibaan Prof Gaandi: Dowladda Waxay Bur-Burineysaa Federaalka